अफिस रोमान्स कर्मचारियों बीचको सम्बन्ध हो जुन व्यापार भन्दा पर जान्छ। केहि कम्पनीहरूले यसलाई आँखा हेराइन्छन्, अन्य संगठनहरूमा यसलाई कडा निषेध गरिएको छ, बर्खास्त सहित। तर तपाईं आफ्नो मन आदेश गर्न सक्दैन! तसर्थ, यदि यस्तो कथा भयो भने, सम्बन्ध लुकाउनको लागि सुरक्षा नियमहरू पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
काममा फ्लर्टिंग छैन!
कार्यक्षेत्रमा, यसलाई एक अर्कासँग पूर्ण रूपमा त्याग्न आवश्यक छ, विशेष गरी यदि परिसरमा निगरानी क्यामेरा जडान गरिएको छ। अवश्य पनि, राम्रोसँग कुराकानी गर्न निषेध गरिएको छैन, तर यसलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ फ्लर्टिंग काममा, सints्केतहरू, टचहरू, र प्रेममा खस्ने वा चासो बढाउने अन्य संकेतहरू।
के तपाई कसैलाई याद गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ? कसरी, त्यस्तो होइन! त्यस्ता कुराकानीहरू चाँडै अन्य मानिसहरूले पनि पढ्दछन्। र, अवश्य पनि, कार्यस्थलमा यौन स्वीकार्य छैन।
म तिमीलाई लेख्दै छु
यदि तपाईंसँग अफिसको रोमान्स छ भने, कर्पोरेट ईमेललाई सबै प्रकारका प्यारा सन्देशहरू वा फ्लर्टिंग पठाउन प्रयोग नगर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि कर्पोरेट ठेगाना तपाइँको सम्पत्ति होईन, र तपाइँको प्रणाली प्रशासक वा मालिकले कुनै पनि समयमा यसलाई जाँच गर्न सक्दछ। तपाईंको पत्राचार पढ्न तिनीहरूलाई कत्ति रमाइलो हुन्छ कल्पना गर्नुहोस्।
मौन सुन हो!
कुनै केसमा तपाइँले तपाइँको कार्यालयको रोमान्स बारे जानकारी तपाइँका कामका सहकर्मीहरूसँग साझा गर्नु हुँदैन। सबै कुरा यहाँ सरल छ! ढिलो होस् वा चाँडो, तिनीहरू अझै पनि आफ्नो वरिष्ठलाई रिपोर्ट वा गफ कुरा।
यदि हेजिंग कडाइका साथ प्रतिबन्धित छ भने, त्यसो भए बर्खास्तको बराबर हो। तपाईं आफ्नो क्यारियरको दुश्मन हुनुहुन्न ... र हो, सामाजिक नेटवर्कमा संयुक्त फोटो प्रकाशित गर्न, कुनै फोटोमा कर्मचारीलाई ट्याग गर्न आवश्यक पर्दैन।
तपाईंलाई कतै आगो लगाउने मान्छेहरूसँग प्रेम कथाहरू नराख्नुहोस्। यो आत्म-संरक्षणको एक वृत्ति को रूपमा subcortex लेख्नु पर्छ। यो कसरी समाप्त हुन्छ भनेर वर्णन गर्न आवश्यक छैन।
उदाहरण को लागी, प्रेम समाप्त भयो, र यो तपाईंको बॉस को लागी एक असहज भयो प्रत्येक दिन एक पुरानो जोश मा टक्कर। उसले के गर्न सक्छ? सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको आगो र बिर्सनु हो।
काममा रोमान्सको आधारभूत नियम भनेको षडयन्त्र हो
यदि तपाईंको सम्बन्ध यति गएको छ कि तपाईं समान साथीमा सँगै उठ्नु भएको छ भने, त्यसोभए तपाईं छुट्टै काम गर्न आउनुहुनेछ। यसलाई उत्तम गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। उदाहरण को लागी, एक सहकर्मीको कार बाट बाहिर सडक को एक जोडी काम को स्थान को पहिले, आदि।
कुनै पनि परिस्थितिमा काम गर्ने ठाउँमा चीजलाई क्रमबद्ध नगर्नुहोस्, यदि तपाईंलाई लाग्छ कि कसैले तपाईंलाई देख्दैन वा सुन्न सक्दैन। अर्थको नियम अनुसार यस समयमा केवल कोही अफिसको छेउबाट जानुहुन्छ र तपाईंलाई सुन्न वा धर्मी क्रोध र क्रोधको सबै महिमामा देख्नुहुनेछ। यो अनुमान गर्न गाह्रो छैन कि तपाइँसँग केवल कामको तुलनामा अझ बलियो सम्बन्ध छ।
तपाईं केहि प्रमाणित गर्नुहुने छैन!
उत्तेजकका लागि नपार्नुहोस्। अनुमान गर्नु र जान्नु दुई फरक कुरा हुन्। तसर्थ, यदि सहकर्मीहरूले केहि अनुमान गर्दै छन्, तर उनीहरूसँग तपाईंको रोमान्सको प्रमाण छैन भने, यो उनीहरूको समस्या हो। तपाईं इमान्दारीपूर्वक रिस उठाउन र सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सम्मानको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी प्रेममा फस्नबाट छुटकारा पाउन: मनोवैज्ञानिकबाट सल्लाह
एक महिला संग एक सम्बन्ध मा पुरुष मनोविज्ञान
एक पुरुष र एक महिला बीच साँचो प्रेम - यो अवस्थित छ?
के ईर्ष्या प्रेमको प्रतीक हो?
कसरी एकाकीपनको साथ पागल हुने छैनः मनोवैज्ञानिकबाट सल्लाह
59 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,473 प्रश्नहरू।